February 26, 2022 by Martin6
Ye2022 Samsung's top-tier flagship renji iGirazi S22 yakatevedzana, inosanganisira diki S22, iyo yakakura zvishoma S22+, uye yakakura kwazvo S22 Ultra - yekupedzisira iyo inouya neyakakomba-kumucheto skrini uye yakabatanidzwa S Pen stylus, kusiyana neimwe. mienzaniso miviri. Kune iyo yakazara seti yemusiyano pakati pevatatu, tarisa chimiro chedu, chinongedzo pazasi: Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy S22 matipi uye matipi: Tenzi iyo S22, S22+, S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra wongororo: Yekupedzisira kudzoreredza?
Kune avo vakachema kusavapo kweSamsung's Note series muna 2021, pane Galaxy itsva yekugutsa chishuwo chako: iyo Samsung Galaxy S22 Ultra. Kungozvitarisa kamwe chete uye unenge uchiona zvakapetwa kaviri, nekuti iyi yepamusoro-tier handset inotaridzika zvakanyanya seChirevo chisina kumbovapo. Izvo zvakasiyana zvachose kune iyo Galaxy S22 uye S22 + modhi mumhando, nekuti mukuru kune iyo S22 Ultra's ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy S22 Ultra ongororo: Ultimate revention?
Pane kuvhiringidzika kwakawanda kwakatenderedza iyo Galaxy S22 nhevedzano uye mitengo yezororo yezviratidziro zvavo. Tiri mubishi rekuongorora iyo S22+ uye S22 Ultra uye taida kugovera ruzivo rwedu kuyedza nekujekesa izvo Samsung's PR yaisakwanisa. Ngatitange nezvikumbiro zvepamutemo. Iyo Samsung Galaxy S22 Ultra inoratidzira ine inosiyana yekuzorodza mwero kubva ku1Hz kuenda ku120Hz. The… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy S22 + uye S22 Ultra yekuzorodza mwero yakatsanangurwa
Maitiro ekubvisa Samsung Yemahara kubva kuGlass S22 Home Screen
"Samsung Yemahara" ndiyo inounganidza zvemukati zvekambani. Inotarisira kushandira zvinyorwa zvenhau, podcasts, mavhidhiyo, uye mitambo, zvese zvemahara-saka iro zita. Inosanganisirwa pane mamwe maGalaxy S22 zvishandiso. Tichakuratidza kuti unoibvisa sei. Iyo yakasarudzika Samsung yekumba skrini yekuvhura paGalaxy S22 yakatevedzana ine "midhiya peji" pane yekuruboshwe-yakawanda peji reimba skrini. Pane mamwe mamodheru, iGoogle… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekubvisa Samsung Yemahara kubva kuGalaxy S22 Home Screen
Samsung Galaxy S22 + vs S21 FE vs S21 +: Ndeupi musiyano?
Samsung yakazivisa mhando yeGlass S22 pachiitiko chayo chisina kuvharwa musi wa9 Kukadzi. Iyo kambani yakaratidza iyo Galaxy S22, Galaxy S22 + uye Galaxy S22 Ultra, ichibudirira iyo S21, S21 + uye S21 Ultra kubva 2021. Zvishandiso zvichangoburwa zvinogara pamusoro peiyo ichangobva kuziviswa Galaxy S21 FE. Uine izvo mupfungwa, iyi ndiyo nzira iyo Samsung Galaxy S22 uye S22 + inofananidzwa neGirazi S21 FE uye ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy S22 + vs S21 FE vs S21 +: Ndeupi musiyano?
OnePlus ine runyerekupe rwekuburitsa "Ultra" mureza runhare gore rino, uye haizobva paSnapdragon chipset.
OnePlus yakanga yawana mukurumbira wemafoni e "flagship killer" yepakati, asi kambani ichangobva kusiyanisa chigadzirwa chayo kuti ibudise mamwe mafoni emhando yepamusoro pamwe neanodhura epakati-rangers. Iyo Shenzhen tech hofori yave mubishi rekugadzira "Ultra" mureza runhare, sekureva kwakakurumbira Indian tipster Yogesh Brar. Sekureva kwetipster, iyo nyowani mureza ... [Verenga zvakawanda ...] nezve OnePlus ine runyerekupe rwekuburitsa "Ultra" mureza runhare gore rino, uye haizobva paSnapdragon chipset.
Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: Ndeipi misiyano ine runyerekupe?
Samsung ichazivisa yayo inotevera mureza weGalaxy S nhevedzano musi wa9 Kukadzi panguva yayo isina Kurongeka chiitiko, ine Galaxy S22, Galaxy S22 Plus uye Galaxy S22 Ultra zvese zvinotarisirwa. Kunyangwe pasina ruzivo rwepamutemo ruchagovaniswa kusvika chiitiko, kwave nerunyerekupe rwakawanda rwakatenderedza michina mitatu iyi. Tine izvozvo mupfungwa, tiri kuenzanisa kuti matatu 2022 Samsung Galaxy S zvishandiso ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: Ndeipi misiyano ine runyerekupe?
Leaked Galaxy S22 Plus inopa kuratidza dhizaini yayo, simbisa zvimwe zvakatemwa
Mumavhiki mashoma, Samsung ichasimudza zvivharo kubva kune yayo inotevera mureza smartphone mutsara - iyo Galaxy S22 yakatevedzana. Zvichienderana nekuvuza uye nerunyerekupe rwatakaona kusvika parizvino, iyo Galaxy S22 yakatevedzana ichasanganisira matatu maturusi senge gore rapfuura - iyo vanilla Galaxy S22, iyo Plus musiyano, uye iyo Galaxy S22 Ultra. Mumavhiki mashoma apfuura, takadzidza zvakati wandei nezve Samsung iri kuuya… [Verenga zvakawanda ...] nezve Leaked Galaxy S22 Plus inopa kuratidza dhizaini yayo, simbisa zvimwe zvakatemwa
Samsung Galaxy S22 Ultra inonzi ichadzikisa S Pen latency katatu
Zvishoma nezvishoma asi chokwadi, zvese zvese nezve Samsung inotevera Galaxy S22 nhevedzano iri kuburitswa pamberi pekutanga kwepamutemo. Iyo Galaxy S22 Ultra inogona kunge yakanyanya kunakidza paboka, sezvo ichiita kunge iri kutsiva iyo yakareba-inomhanya yeGalaxy Note mutsara, uye ruzivo nezve kamera yefoni yakaburitswa kutanga svondo rino. Iye zvino tine mamwe mashoko pamusoro pefoni. Zaryab… [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy S22 Ultra inonzi ichaderedza S Pen latency katatu
Iyi ndiyo iri kuuya 2022 mureza wevaverengi vedu vari kutarisira zvakanyanya
Migumisiro yacho haishamisi. Zvaunoda kuziva Takabvunza kuti chii chiri kuuya 2020 vashandisi vemureza vaitarisira. Inosvika hafu yevhoti yevhoti yaive yeGirazi S22 yakatevedzana. Iyo Pixel 6a uye OnePlus 10 yakatevedzana yakateverwa neyechipiri neyechitatu mavhoti mazhinji, zvichiteerana. Chizvarwa chinotevera chemafoni emhando yepamusoro chatove patiri nekuda kwe… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyi ndiyo iri kuuya 2022 mureza vaverengi vedu vari kutarisira zvakanyanya